I-UKZN isineziqu ze-BSc in Geo-Information Science and Earth Observation kusukela ngowezi-2022.
I-UKZN Yethule Iziqu Ezintsha kwi-GIS Nokucwanginwa Komhlaba
Ubuchwepheshe besimanjemanje, phecelezi i-4th Industrial Revolution, kwenze ukuthi kwande ukusetshenziswa kwemininingwane yezindawo ekuthatheni izinqumo ngokuhambisana nokukhuthazwa kweminotho encike ebufakazini nasolwazini.
Ukuhambisana nalezizinguquko ezintsha kusungulwe izifundo ezintsha eSikoleni SezoMhlaba neSayenzi yezeMvelo.
Lezizifundo, ezifundelwa iminyaka emithathu kwi-Geo-Information Science and Earth Observation (i-Remote Sensing), zihlose ukwakha amakhono anqala nasezingeni eliphezulu ekucubunguleni nasekubhekeni ezemvelo kusetshenziswa ubuchwepheshe be-GIS nobokuhlola izinto zikude. Lezizifundo zenza ithuba lokufunda lokucija izitshudeni lizicijela ukungena emkhakheni we-Geographical Information noma wokuba nolwazi namakhono okwenza izinto ngendlela yesayensi ukuzilungiselela ukwenza izifundo ezilandela ezokuqala. Uma seziqedile ziyokwazi ukudingida izinto ezithinta izikhathi zamanje nokusungula amaqhinga ezokuphatha kwezendawo uma kuthathwa izinqumo.
Umqondo walezizifundo ezintsha waqala eminyakeni edlule ngemva kokubona ukuthi izinhlangano eziningi eNingizimu Afrika nasesifundeni ziyasimama ngokwemininingwane yezindawo, okuholela esidingweni sabantu abanalamakhono kwi-GIS nasekuhloleni umhlaba. Ukwethulwa kwalezizifundo kwagqugquzelwa nangukubona ukuthi ukuhlolwa komhlaba neSayensi nobuChwepheshe boMkhathi bungezinye zezinselelo ezihamba phambili kwi-10-Year Innovation Plan yoMnyango weZesayensi neZobuchwepheshe, ewuhlelo oluphasiswe yiKhabhinethi olweseka i-South African National Space Agency Act, wezi-2008.
Ukuqeqesha izitshudeni kuseqhulwini empumelelweni yezifundo zokucwaninga umhlaba nomkhathi. Okwamanje maningi amanyuvesi eNingizimu Afrika afundisa izifundo ze-GIS ezifundweni zeSayensi Yezemvelo noma Yeziqu Zezendawo. Nakuba lezizifundo zihlomisana ngesisekelo sokuqonda lesisifundo, ukwethulwa kwezifundo eziphelele zalomkhakha kuzocija amakhono abantu abafundela lomkhakha ngolwazi, amasu, okuhambisana nokuqonda izindlela zezemvelo nezinguquko zazo ngesikhathi sokuguquguquko esimweni sezulu.
Ngemuva kokuvunywa kwalezizifundo iDini neNhloko yeSikole uSolwazi uhatuwani Mudau ithe: ‘SiyiSikole sithakasile ukwethula lezizifundo ezizobhekana nezidingo zemiphakathi yakithi. Lezizifundo zizokwenza abafundi ukuthi bakwazi ukubhekana nezinselelo zesikhathi sobuchwepheshe besimanje nezinga eliphezulu emphakathini wakithi.’
Njengoba lezizifundo zihlanganisa imikhakha ehlukene ukuhlanganiswa kwazo kufake imikhakha ehlukene okukhona kuyona oweZezibalo, owe-Stastics, oweSayensi yezamaKhompiyutha, Ezendawo, iFiziksi neSayensi YezeMvelo, ongoti bazo abahlanganile ukwethula izinsika nezinhlelo zalezizifundo. Iqhaza labaholi beSikole nabaseKolishi kanjalo ne-Quality Promotion and Assurance kwenze ukuthi izinto zididiyeleke kahle ekuhlanganiseni lezizifundo.
Ngemva kokubhaliswa ngokuphelele kwi-Higher Education Qualification Sub Framework ezingeni lesi-8 le-National Qualifications Framework, ngokwemiyalelo yencwadi ye-Qualifications Authority ebhalwe umhla wezi-28 kuMbasa, lezizifundo zizoqala ukufundiswa ngonyaka wezi-2022.
Ukuzibhalisela kudingeka amaphuzu e-NSC angama-30 neZibalo (Izinga lesi-5), i-Physical Science, i-Life noma i-Agricultural Science (Izinga lesi-4).
Ngeminye imininingwane, kungathintwa uSolwazi Onisimo Mutanga.
Amagama: ngu-Onisimo Mutanga
Imiphumela Yezempilo Yondendende lwe-COVID-19
OwezezeMidlalo e-UKZN UyiNhloko Yeqembu LaseBhishi Lase-KZN
Kudingidwe Impilo Yabasebenzi Abafundisayo Ngesikhathi Se-COVID-19